Tag: Kupọns | Martech Zone
Ecrebo: Ijikwa ahụmịhe POS gị
Wenezdee, Machị 1, 2017 Tọzdee, Machị 2, 2017 Douglas Karr
Ọganihu na nkà na ụzụ na-enye ohere dị egwu maka ụlọ ọrụ iji melite ahụmịhe ndị ahịa. Nhazi nke onwe abughi ihe bara uru maka ulo oru, ndi ahia na-ekele ya. Anyị chọrọ azụmahịa ndị anyị na-agakarị iji mata onye anyị bụ, kwụghachi anyị ụgwọ maka nkwado anyị, ma nye anyị ndụmọdụ mgbe njem ịzụ na-aga n'ihu. Otu ohere a ka akpọrọ POS Marketing. POS na-anọchi anya ebe a na-ere ahịa, ọ bụkwa akụrụngwa ndị ahịa ahịa na-eji
Ndi Discounts Devalue a Brand More karịa Free?
Tuzdee, Machị 17, 2015 Tuzdee, Machị 17, 2015 Douglas Karr
Anyị na-enwe ezigbo mkparịta ụka banyere ihe ngosi m na-abịa na Social Media Marketing World banyere ụdị onyinye anyị nwere ike inye ndị mmadụ bịara nnọkọ m ma ọ bụ ihe omume ahụ dum. Mkparịta ụka ahụ bịara na ma iwelata ego ma ọ bụ nhọrọ ọ bụla nwere ike iweda ọrụ anyị ga-eweta ala. Otu n’ime ihe ndị m mụtara bụ na ozugbo e debere ọnụahịa, a na-edozi uru ahụ. Ọ naghị adịkarị